कलाकार प्रसाद खप्तरी मगरकाे 'अाँखैमा बसेकी छ्याै' बजारमा -बिगुल न्यूज
कलाकार प्रसाद खप्तरी मगरकाे ‘अाँखैमा बसेकी छ्याै’ बजारमा
पुष २१, २०७४ NK-Bigul Media
काठमाडाैँ । साेरठी, सालैजाे जस्ता परम्परागत सांस्कृतिक गीत गाउने कलाकार प्रसाद खप्तरी मगरले पहिलाे पटक अाफ्नै स्वर, शब्द संगीतमा अाधुनिक गीत बजारमा ल्याएका छन् । अाँखैमा बसेकी छ्याै बाेलकाे अाधुनिक गीत कलाकार खप्तरीले युट्युव च्यानल मार्फत शुक्रबार सार्वजनिक गरेका हुन् । सधै मगर संस्कृति र लाेप हुँदै गएका परम्परागत गीतहरू साेरठी र सालैजाे गाउँदै अाएका गायक खप्तरीले स्राेताहरूलार्इ नयाँ स्वाद चखाउँदै अाधुनिक गीत गाएका हुन् ।
”स्राेताहरू सबैखाले छन् सधै एउटै प्रकारकाे गीत गाइरहँदा अलिकति फरक स्वाद दिउँन भनेर अबसर पाएँ त्यसैले अाधुनिक संगीत पनि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेकाे हुँ,” कलाकार खप्तरीले बिगुल न्यूजसँग भने, ”ब्यवसायिक रूपमा संगीत क्षेत्रमा लागेकाे करिव ५ वर्षे संगीत यात्रामा नयाँ स्वाद दिने प्रयत्न गरेकाे छु सालैजाे गीतमा जस्तै अाधुनिक गीत पनि स्राेताले उत्तिकै मन पराउनुहुनेछ र मायाँ गर्नुहुने छ भन्ने अाशा गरेकाे छु ।”
पछिल्लाे समयमा निकै चर्चा बटुल्न सफल माेडल दुर्गेश थापाले खप्तरीकाे यस गीतमा अभिनय गरेका छन् । थापाकै निर्देशन तथा सम्पादन रहेकाे यस भिडियाेमा माेडल मञ्जुले साथ दिएकी छिन् । मार्मिक शब्द संगीतसँगै कलाकारहरूकाे उत्कृष्ट अभिनयले गीतलार्इ अझ जिवन्त बनाएकाे छ ।
खप्तरीका सालैजाे र साेरठी भाकामा गाइएका गीतहरू माैलिक सालैजाे, खुर्पेटाेमा अाँशी, अामाछाेराले गाएकाे ठाडाे भाका, तीजका गीत लजाउने माया लगाएतका थुप्रै गीतहरू चर्चित छन् ।
अाँखामा बसेकी छ्याै गीतकाे पूरा भिडियाे हेर्नुहाेस् –
प्रकाशित : शुक्रबार, पुष २१, २०७४१६:३५
भारतको पुनेमा नेपालका १० फिल्म: कुन कुन हुन् ति ?
‘तास खेल्दा ३६ लाख रुपैयाँ हारेपछि अमेरिका जान बाध्य भए’ – नायक रमेश उप्रेती
सलमानको घरमा राती एक्कासी शाहरुख
रणवीर कपूरले भने, ‘सञ्जय दत्त ठग हुन् ।’ कारण के हो ?
प्रथम रोधी सिने अवार्ड माघ २० मा हुने, एकै निर्देशकका ४० चलचित्रबीच प्रतिस्पर्धा
चलचित्र ‘माइ लभ’ को गीत सार्वजनिक